How to Get Solar Certification - 1z0821 & 1z0876 - Its School Tech
Ahoana ny fahazoana solarisena fanamarinana - 1z0821 & 1z0876
Famaritana ny fampiofanana
Saraho ny Reduced
Rehefa mitady Solaris mari-pankasitrahana, mahafinaritra ny mandinika ny toetoetry ny fandaharam-pampianarana izay hatolotra, ny tetik'asa fanabeazana modules, ny votoatiny ary ny tanjony. Amin'ity lahatsoratra ity dia haka tahaka ny fomba fanao Hadoop fiofanana dia afaka manampy anao hahatratra io fanamarinana io. Ny fianarana dia tokony hampiditra tanjona, ohatra, ny fahatakarana ny karazan-tsakafo sy ny toetra maha-izy azy, ireo hevitra manosika hevitra, dia mahazo ny fampiasana tsy tapaka -fahafatesana ary manodina ny kajy mifampiraharaha, ny taratasy mifehy ny apache fototra. Ity fampianarana ity dia hanampy hanangona fampahalalana momba ny kisoa sy ny ampahany.
Misy fomba vitsivitsy amin'ny famaritana ny fomba fijerena ny fitadiavana toerana hahazoana fiofanana. Miantehitra amin'ny fotoana ahafahana mianatra izany. Ny fampiofanana dia tokony ho azo atao tahaka ny fianarana mifototra amin'ny Internet, manakaiky sy manokana, manidina mpanohana sy mpitsidika. Ny paikady dia azo ampifanarahana amin'ny fanamboarana azy ho an'ny olona mety te-hanampy ny asany raha mbola mitana ny andraikiny izy ireo. Fomba tsara kokoa amin'ny fianarana amin'ny aterineto dia ny hanakaiky kokoa ny fianakavianao, hahazo tombony amin'ny alàlan'ny tranonao na ny biraonao, ary amin'ny fotoana manokana anao.
Hadoop fiofanana dia tena ilàna ny olona tsirairay izay mila ny fanamarinana Solaris. Ny fampiofanana dia tonga lafatra ho an'ireo mpanolotra rafitra mpanatontosa, manam-pahaizana, miezaka ny manadinadina ny fampahalalam-baovao, manitatra ny lehiben'ny governemanta sy ny fampahalalam-baovao. Mahavariana ihany koa ho an'ny tsirairay izay miasa ary mila miezaka ny hanatsara ny fahaiza-miaina na hamerina azy
Misy ny lazan'ny fahaiza-manao amin'ny famolavolana ny data ary ny fikambanana na ny fikambanana tsirairay dia mila manana tale mahay izay afaka mifampiraharaha amin'ny karazana rafitra iray ho an'ny fikambanana. Ny haavon'ny fanomanana ny fampahalalam-baovao dia ivony.
Ny fitantanana ny fampahalalam-baovao dia faritra iray natao tamin'ny PC. Ny fitantanana sy ny fampiofanana Hadoop dia manome ny fahaizana mifehy ny fampahalalana ao amin'ny solosaina, ary manampy amin'ny fanovana ny fampahalalam-baovao mahomby ao anaty rafitra iray. Haka ny fampahalalam-baovao ao amin'ny PC sy ny hafa amin'ny peripheralazan'ny rafitra, ny fitrandrahana informatika izay ahitana ny fahafaha-misaina fampahalalam-baovao izay mila olona mahay.
Maka ny zava-drehetra miaraka, ny iray dia mitaky ny fianarana sy ny fahatakarana ny fahaiza-manao ary ny fitazonana ny informatika informatika. Ankoatr'izany, ny ITS dia manome fampahalalana amin'ny faritra rehetra mitaky an'io hery miasa mangina io. Ho hitanao ny fomba famolavolana ny fampahalalana, mandefa, mitazona sy miantoka ny fampahalalam-baovao amin'ny fomba miavaka.
Hianatra lesona karazana, marefo ary ny fahaiza-manaony ianao ary mandray ny fampahalalam-baovao momba ny kisoa sy ny ampahany. Izany dia manome ny fahaiza-manao manan-danja izay ilaina mba hampihenana haingana ny fiomanana. Hahazo tombony avy amin'ireo manam-pahaizana izay manana fampahalalam-baovao mahafa-po, na amin'ny foto-pisainana sy amin'ny fahaiza-miaina eto an-tany.
Ny fanombohana dia afaka mihazakazaka eo akaikin'ireo fitaovana samihafa ary ny haingon-tsariny ary manana tarehimarika. Tsara ho an'ny fandaharan'asa programming hafa izany, ka mahatonga ny programa ho tsotra. Ny Sparkles dia afaka mihazakazaka irery ary mamaky fampahalalana misy amin'izao fotoana izao dia mety ho fampahalalana goavana izany na kely. Ny loham-pahefana iray miomana dia afaka mampiasa amim-panajana ny apache. Tsy mahomby ny fampiasana azy. Toy izany koa ny fahombiazana sy ny fahaizana.
Hahita ihany koa ny sarintany izay hampivelatra anao hampisaraka ny fampahalalana goavana amin'ny ampahany kely mety sy hahazoana tombony amin'ny fampiasana. Ao anatin'izany no hahafantaranao ny torolalana sy fitarihan-dalana izay ahafahana mandamina ny fandaharam-baovao amin'ny karazana fampahalalana hafa
Ny Pig dia mampiasa ny fiteny dialect amin'ny fiteny malaza fantatra amin'ny anarana hoe Pig Latin, ary ny fizotry ny asa dia natosika. Toeram-pitsaboana tsy misy fitenenana ny fisintonana ireo tahiry fampahalalam-baovao lehibe dia kisoa apache. Ny kisoa apache dia manampy ny scripting amin'ny dialect ampiasaina ho ampahany ao amin'ny Apache Hadoop. Ny fahaiza-manaonao dia manome hery anao amin'ny famolavolana rakitra sy horakoraka be dia be ao anatin'ny fotoana fohy. Hiantsoroka mpivady ny fampiasana azy io ianao, kanefa tsy tokony ho mpanazatra amin'ny programa JAVA ianao.
ITS dia mitanisa ampaham-potoana voamarina ao amin'ny solariso. Manana ny fitaovana, programa ary ny fananana izay mitondra amin'ny rivotra. Manana fahaiza-manao sy fandraisana anjara amin'ny sehatry ny fiorenana izy ireo, fametrahana vaovao momba ny fandaminana miaraka amin'ny fampahalalana misongadina. Ny fampitoviana Solaris izay irinao dia sombiny kely fotsiny. Ny fomba fianarana dia azo ampifanarahana amin'ny olona tsirairay miezaka mifanena amin'ny nofinofiny.
Ny fankatoavana dia hita na aiza na aiza manerana an'izao tontolo izao. Manome toerana avo izany noho ny fiovan'ny toetry ny asa miaraka amin'ny hetsi-bahoaka mavesatra sy ny fandaminana vaovao. Noho izany, ny lohany dia hiantehitra amin'ny fananana fomba iray manontolo mifandraika amin'ny fisafidianana sy ny fampiasana ireo rafitra miasa izay afaka mifanaraka amin'ny asa.
Oracle Fanamarinana - Torolalana iray feno